प्रविधिमा पिछडिएका कारण दक्ष न्युरो सर्जनले पनि सीपको उचित प्रयोग गर्न पाएका छैनन् – Health Post Nepal
प्रविधिमा पिछडिएका कारण दक्ष न्युरो सर्जनले पनि सीपको उचित प्रयोग गर्न पाएका छैनन्
२०७५ चैत २२ गते १५:४२
नेपाल न्युरो सर्जरी समाजको आयोजनामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय न्युरो सर्जन सम्मेलनसँगै समाजको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबारदेखि काठमाडौंमा एकैसाथ चलिरहेको छ । तीनदिने सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार पनि विभिन्न देशका न्युरो सर्जनहरूले न्युरो सर्जरीको वर्तमान अवस्था, आवश्यकता, विकासका लागि भावी रणनीतिबारे कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्दै त्यसमाथि गहन छलफल गरिरहेका छन् । सम्मेलनको उद्देश्य, नेपाल र बाँकी विश्वमा न्युरो सर्जरीको अवस्था, समस्या, प्रविधि तथा उपकरणको अवस्था र आवश्यकता, जनशक्तिको उपलब्धता र व्यवस्थापनलगायत विषयमा केन्द्रित भएर समाजका महासचिव डा. प्रवीण श्रेष्ठसँग हेल्पपोस्टका पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :
नेपालमा न्युरो सर्जरीको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा न्युरो सर्जरीको अवस्था क्रमिक रूपमा राम्रो हुँदै गएको छ । १० वर्षअघिको अवस्थासित अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुँदै गएको महसुस हुन्छ । पहिले न्युरो सर्जरी हेर्ने १५ जना सर्जन थिए भने आज ८० जनाको हाराहारीमा सर्जन उपलब्ध छन् । यद्यपि, अन्य देशको तुलनामा हेर्ने हो भने यो संख्या अत्यन्तै न्यून हो । तर, न्युरो सर्जरीका लागि न्युरो सर्जन मात्र भएर पुग्दैन । कुनै पनि उपचार वा अप्रेसन गर्दा दक्ष जनशक्ति भएर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तथा उपकरणको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । उदाहरणका लागि न्युरो सर्जरीका लागि कम्तीमा पनि सिटी स्क्यान, एमआरआई र प्रविधिसम्पन्न अप्रेसन थिएटर र आवश्यक उपकरण चाहिन्छ । यी उपकरण र प्रविधि नेपालका लागि सामान्य कुरा होइनन् । जुन अस्पतालमा यी उपकरण उपलब्ध छन्, त्यहाँ मात्र एउटा न्युरो सर्जनले उपचार गर्न सक्छ । यसले गर्दा अहिले भएका न्युरो सर्जनको संख्यालाई प्रविधि र उपकरणको अपेक्षामा राम्रो मान्नुपर्छ । न्युरो सर्जरीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार भएको खण्डमा अहिले उपलब्ध न्युरो सर्जनले काठमाडौंलगायत अन्य ठूला सहरका अस्पतालमा राम्रो उपचारसेवा दिन सक्ने अवस्था छ ।
न्युरोको समस्या भन्नाले टाउकोदेखि खुट्टासम्म पर्छ । मूलतः न्युरोसम्बन्धी समस्यालाई तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा प्रमुख भाग टाउको हो । किनकि, शरीरमा नसाको उद्गमस्थल टाउको नै हो, जसलाई हामी ब्रेन (मस्तिष्क) भन्दछौँ । जति पनि समस्या टाउकोमा आउँछन्, ती न्युरो समस्या हुन् ।
नेपाल न्युरो सर्जरी समाजले गरिरहेको न्युरो सर्जनको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको खास उद्देश्य के हो ?
नेपालमा जति न्युरो सर्जन छन्, उनीहरूको सोसाइटी छ । कुनै पनि देशमा विशेषज्ञ चिकित्सकका आ–आफ्ना सोसाइटी छन् । नेपाल न्युरो सर्जन समाजले हेरक वर्ष यसकिसिमको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै आएको छ भने दुई वर्षमा एकपटकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्ने नीति लिएको छ ।
यसरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुको मूल उद्देश्य भनेको न्युरो सर्जरीको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा विकास भइरहेका अत्याधुनिक प्रविधि र उपचार पद्धतिबारे जानकारी लिनु नै हो । हामी नेपालीले नेपालमा बसेर ३–४ दिनको सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न देशमा कस्ता किसिमका न्युरो सर्जिकल प्रविधिको विकास भइरहेका छन्, यी विषयमा अन्य देशबाट आएका विज्ञहरूबाट जानकारी लिने र त्यसलाई आफ्नो देशमा पनि प्रयोगमा ल्याउने कुरा हो । विभिन्न देशका विज्ञहरूबाट नयाँ कुरा सिक्ने मात्र नभएर हाम्रो देशमा न्युरो सर्जरीको अभ्यास कसरी गरिरहेका छौँ त, त्यसबारे विमर्श र मूल्यांकन गर्छौं । नेपाल र जापानको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने न्युरो सर्जरीमा हामीभन्दा जापान धेरै गुना अगाडि छ । यसो भन्दैमा नेपालमा सर्जरी नै नगर्ने त ? अत्याधुनिक किसिमका उपकरण उपलब्ध नभए पनि सर्जरी गर्दै आएका छौँ । सीमित स्रोत–साधन र उपकरणको कमी भएको अवस्थाका बाबजुद पनि हामीले न्युरो सर्जरी गरिरहेका छौँ, जसबारे हामी सम्मेलनमा विस्तृत छलफल गर्छौं र राम्रो गर्ने उपयको खोजी गर्छौं ।
सम्मेलनमा कति देशका प्रतिनिधिले कसरी सहभागिता जनाएका छन् ?
सम्मेलनमा १ सय ५० जनाको हाराहारीमा सहभागिता छ । त्यसमध्ये १३ देशका करिब ३५ जना विदेशी न्युरो विज्ञ छन् । जापान, भारत, चीन, अमेरिका, क्यानडा, पोर्चुगल, बेलायत, जमर्नी, माल्दिभ्सलगायत १३ देशका विज्ञले सहभागिता जनाएका छन् । ३ दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १ सय ४० भन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।
नेपालमा न्युरो सर्जरीको उपचारपद्धति र प्रविधिको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा केही वर्षदेखि न्युरो सर्जनको संख्या बढिरहेको छ । जनशक्ति मात्र नभएर सिटी स्क्यान, एमआरआई, अप्रेसन थिएटरमा आवश्यक उपकरणलगायत पूर्वाधार पनि बढिरहेका छन् ।
कुनै पनि प्रविधिको विकासका लागि विविध पक्षको जरुरत हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा अर्को आवश्यकीय कुरा भनेको नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था हो, जुन क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने न्युरो सर्जरीलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
नेपालमा खासगरी न्युरोसम्बन्धी के–कस्ता समस्या बढी पाइने गरेका छन् ?
न्युरोको समस्या भन्नाले टाउकोदेखि खुट्टासम्म पर्छ । मूलतः न्युरोसम्बन्धी समस्यालाई तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा प्रमुख भाग टाउको हो । किनकि, शरीरमा नसाको उद्गमस्थल टाउको नै हो, जसलाई हामी ब्रेन (मस्तिष्क) भन्दछौँ । जति पनि समस्या टाउकोमा आउँछन्, ती न्युरो समस्या हुन् । ब्रेनको ट्युमर अथवा ब्रेनको इन्फेक्सन, हेड इन्जुरीलगायत सबै कुरा ब्रेनका नसाका समस्या हुन् । नसासम्बन्धी (न्युरो) समस्याको दोस्रो भाग मेरुदण्ड हो, जुन ब्रेनबाट सुरु भएर कम्मरसम्म पुगेको हुन्छ र यसलाई मूल नसा भनिन्छ । उदाहरणका लागि कम्मरको नसामा हुने चोटलाई लिन सकिन्छ । ढाड तथा गर्दनमा नसा च्यापिने र ढाड तथा कम्मरका नसाबाट ट्युमर पलाएर आउने समस्या मेरुदण्डका समस्या हुन् ।
नसासम्बन्धी समस्याको तेस्रो भाग भनेको टाउको र मेरुदण्डबाहेकका भागमा फैलिएका स–साना नसामा देखिने समस्या हो । ब्रेनबाट मेरुदण्डमा नसा पुगको हुन्छ र मेरुदण्डबाट हात र खुट्टामा मसिना नसा पुगेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि हात–खुट्टामा झमझम गर्ने तथा पोल्ने समस्या र हातखुट्टा नचल्ने समस्यालाई नसासम्बन्धी समस्याको तेस्रो भागका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ ।
सरकारी अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक उपलब्ध नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले नै अधिकांश स्वास्थ्यसेवा धानेको अवस्था छ । निजी क्षेत्र अलिक महँगो पनि छ । महँगा उपकरणका कारण निजी स्वास्थ्यसेवा महँदो भएको हो । उदाहरणका लागि एउटा सिटी स्क्यानका लागि ४–५ करोड रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी अस्पतालमा न्युरो सर्जनको कमी रहेको बताइन्छ, निजीमा सबै जनताको पहुँच पुग्ने अवस्था छैन । यस्तोमा आमनागरिकले कसरी न्युरो सर्जरी सेवा लिने ?
निश्चय पनि सरकारी क्षेत्रमा न्युरो सर्जरीका मात्र नभएर अन्य विधाका चिकित्सक पनि कमै उपलब्ध छन् । सरकारी दरबन्दीमा न्युरो सर्जनको अवस्थालाई हेर्ने हो जम्मा ३ जना मात्र दरबन्दीमा कार्यरत रहेको अवस्था छ, जुन नगण्य हो । विदेशमा हेर्ने हो भने सरकारी क्षेत्रमा बढी र निजीमा कम हुन्छन् । नेपालको अवस्था भने उल्टो छ । सायद सरकारका पनि धेरै समस्या छन्, त्यसमाथि पनि नेपालमा अस्थिर सरकारको प्रमुख समस्या छ । अब बल्ल देशले स्थिर सरकार पाएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक उपलब्ध नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले नै अधिकांश स्वास्थ्यसेवा धानेको अवस्था छ । निजी क्षेत्र अलिक महँगो पनि छ । महँगा उपकरणका कारण निजी स्वास्थ्यसेवा महँदो भएको हो । उदाहरणका लागि एउटा सिटी स्क्यानका लागि ४–५ करोड रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, एमआरआई मेसिन राख्नका लागि ५–६ करोडदेखि १५ करोडसम्म लाग्छ । सरकारी अस्पतालमा सरकारी मेसिन खरिदका लागि सरकारी बजेट हुन्छ । निजीमा व्यक्तिगत लगानी भएको हुन्छ । यसले गर्दा उपचारमा निश्चिय पनि सरकारी अस्पतालको अपेक्षामा निजी अस्पताल महँगो छ ।
आज निजी क्षेत्र नहुँदो हो त सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले मात्रै न्युरोका समस्यालाई धान्न सक्ने अवस्थै छैन ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने न्युरो सर्जरीको उपचारको तुलनामा नेपालको अवस्था कस्तो छ ?
प्रविधिको कुरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो फरक छ । हाम्रो छिमिकी राष्ट्र भारतसँग तुलना गर्ने हो भने सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि हामी धेरै पछाडि छौँ । साउथ एसियामा पनि नेपाल धेरै पछाडि छ । हाम्रो देशमा उपकरण कम छन् । अझै पनि नेपालमा हुनुपर्ने सुविधाहरू कम छन् । प्रविधिको कमीका कारण प्रत्येक चिकित्सक दक्ष भएर पनि, विदेशमा गएर पढेर आएर पनि आफ्नो सीप र दक्षताको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रविधिमा ठूलो खाडल र कमी–कमजोरी भए पनि हामीले सिक्नेवेलामै प्रविधि छैन, काम गर्न सकिन्न भनेर त हुँदैन । त्यसको अर्को केही विकल्प छ कि भनेर हामी सिकिरहेका छौँ ।